inkukhu Stuffed ngeke ukuhlobisa ngokuphelele yimuphi itafula, kungakhathaliseki ukuthi iholidi noma kwansuku zonke. Futhi yeka ukundiza fancy ukuba uwayehlalise, izophila ukhethe izithako ekuzaliseni! Inkukhu zokupheka ezihlukahlukene olukhulu olungakaze, nazi ezinye zazo.
Stuffed inkukhu imilenze
Ukukhumbula izinkukhu eyayigcwele, ukufika kuqala engqondweni yakho isidumbu wonke ezazigxishwe imifino noma okusanhlamvu ahlukahlukene, kodwa eqinisweni ungakwazi izinto inkukhu, futhi kuphela ingxenye, isibonelo, inkukhu imilenze.
imilenze ezintathu uxubha kahle amanzi kanye nokusula usula. Manje kudingeka ukuphuma ithambo ngamunye, ukukwenza ungcono nommese obukhali kakhulu, abahlukanise inkukhu, ithambo ngasesinqeni se imilenze ungawusebenzisa nje emuva. Sithola emaphaketheni anjalo yasekuqaleni.
Imilenze ehlukanisiwe amathambo kancane beat off, ukukuthinta ngaphakathi nangaphandle ngosawoti.
Ukugcwalisa. Ubilise isigamu inkomishi irayisi. 150 amagremu of amakhowe (hhayi ekheniwe) kanye no-anyanisi Imi ku cubes, izaqathe Grate, amakhowe nemifino ethosiwe ibhotela, bese okuhlangana ngayo irayisi, usawoti uhlanganise seasonings ukunambitha.
ukugxusha eliphekiwe izinto imilenze, kusukela amafutha ngaphandle imayonnaise noma yimuphi omunye sauce. Beka inyama kuhhavini ubhake imizuzu 40.
inkukhu Stuffed ngaphandle amathambo
Futhi omunye bokuthi izinkukhu eyayigcwele abakwazi njalo uzilungiselele ngendlela ejwayelekile.
Thatha lonke inkukhu enesisindo mayelana 1.5 khilogremu, futhi manje udinga ukuthatha off isikhumba sakhe. Kusukela imilenze, ukuze kube lula, ungakwazi ukusonta kubo, okubaluleke kakhulu, zama ukuthola isikhumba kuyelelwe bonyana akukafaneli kuphulwe. Plenochki uqwanga wanquma sikelo ekhishini. Wings kwesokunxele esikhumbeni, nje ngomoya ophansi ungamumbi kubo, ezimazombe amalunga omzimba.
Nezibopho ehlukanisiwe imbewu kanye Chop fake. amazambane Five grate, okuthosiwe emafutheni zemifino izaqathe ezimbili ogayiwe kanye anyanisi oqotshiwe. Zonke izithako ukugxusha ukuxubana, engeza usawoti, engeza seasonings neqanda eluhlaza.
Manje izinto ngokucophelela ukugxusha isikhumba, usabalalisa isandla emzimbeni nasemilenzeni. Ngemva bethunga inkukhu, futhi uma isikhumba ngeke ezilimele kabi, ungenza asikiweko elula.
Beka inkukhu bhaka kanye elingenamikhono ke nenye garlic kanye imayonnaise. Bhaka ihora, njalo ethela juice ukugqashuka.
Inkukhu ezazigxishwe uju
Ukugcwalisa. ziyadliwa 2/3 inkomishi nut uthele 150 ml iwayini ezomile ezimhlophe, ake ume imizuzu 15, bese likhanyelwe iwayini kwesinye isitsha. Ukwengeza oqoshiwe kweqembu nuts of Basil ne cilantro, usawoti kanye pepper ugovuze ingxube. Ngaphezu kwalokho alahle ke inkukhu, futhi imbobo noma thunga lokuvungula hlaba.
Ngaphandle inkukhu grate lokuqala usawoti, bese ibhotela, bese camera nge ungqimba ezondile uju.
Beka isidumbu kuhhavini imizuzu engu-15 ukuze uthole futhi uthele iwayini ezisele nati ke ubhake imizuzu 20.
Enye lesi sidlo esingenamathambo esehla iresiphi
Elikhulu inkukhu ukugeza, ungavula imbobo emhlane, futhi ngobumnene ukususa isikhumba, ukuqikelela ukuthi likhiphe. Inyama ehlukanisiwe amathambo crank double ngokusebenzisa inyama Sander okwesibili ukukwenza kanye ofakwe ngobisi ambalwa tincetu isinkwa esimhlophe. Ukuze yokungalungiseleli engeza amaqanda amabili, amagremu 100 bhotela, ambalwa wezipuni kafulawa, isigamu ingilazi yobisi osale sifakwe emanzini isinkwa, pepper, amakinati, usawoti, uhlanganise kahle.
Isikhumba, kodwa ngaphandle ukugxusha, thunga agudle cut, kusale entanyeni khulula, kuso izinto isidumbu ngemuva entanyeni bese bethunga kakhulu.
Optionally, ungakwazi gcoba ingaphandle inkukhu iyiphi sauce: isoso, imayonnaise, lwesinaphi.
Beka isidumbu gazinga kuhhavini 1.5 amahora, ngakho-ke kuyadingeka njalo ngemva kwemizuzu engu-15 kuya amanzi kwakheka kwi juice baking inkukhu.
izinkukhu Stuffed njalo aphume esiphundu kanye namanzi kakhulu!
Cuisine abahlukile Polish
Indlela Yokuthola spaghetti Bolognese.
Elimnandi inkukhu kwamathanga kuhhavini namazambane futhi broccoli
Esishelelayo usekelo amapayipi
Yiziphi veneers amazinyo? Abami on the amazinyo - veneers
"Loft" yokudlela (eMoscow)
Kuyini esiza abantulayo ngokombono inkolo, isayensi kanye namasiko?
Ukholifulawa nge inyama: zokupheka for izitsha esihlwabusayo
Kuyini ukuhlobisa okuwusizo kwabesifazane? Zuza kanye nokulimala kwezithelo ezomile zomzimba